SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
ZVINOTAURA BHAIBHERI | KUZVIDYA MWOYO
Kuzvidya mwoyo kuri paviri. Kunogona kukuvadza kana kubatsira. Bhaibheri rinoita kuti tizive kubatsira kana kukuvadza kunoita kuzvidya mwoyo.
Munhu anofanira kuzvidya mwoyo here?
Kuzvidya mwoyo kunosanganisira kunzwa usina kugadzikana, kutya, kana kunetseka. Muupenyu hatizivi kuti chii chichaitika mangwana, saka tose hedu tinombozvidya mwoyo.
Mambo Dhavhidhi akanyora kuti: “Ndicharamba ndichirwisa mumweya wangu kusvikira rini, Ndiine shungu mumwoyo mangu masikati?” (Pisarema 13:2) Chii chakazobatsira Dhavhidhi? Akanyengetera, achitaura zvose zvaiva pamwoyo pake, aine kutenda kwakasimba kwekuti Mwari anomuda. (Pisarema 13:5; 62:8) Mwari anototikumbira kuti timuturire zvose zvinotinetsa. Pana 1 Petro 5:7 panoti, ‘Kandai kuzvidya mwoyo kwenyu kwose paari, nokuti iye ane hanya nemi.’
Kana ukaitira vanhu vaunoda chimwe chinhu, zvinogona kukubatsira kuti usanyanya kuzvidya mwoyo pamusoro pavo
Kakawanda kacho, tine zvatinogona kuita kuti tisanyanye kuzvidya mwoyo. Semuenzaniso, mumwe munyori weBhaibheri ainzi Pauro ‘paaizvidya mwoyo pamusoro peungano dzose,’ akashanda nesimba kuti anyaradze uye akurudzire vanhu vaiva muungano idzodzo. (2 VaKorinde 11:28) Apa tinoona kuti kuzvidya mwoyo kwaakaita kwainge kwakanaka, nekuti kwakaita kuti abatsire sezvakanga zvichidiwa. Nesuwo tinogona kuita zvimwe chetezvo. Asi kana tisina basa nevamwe, tinenge tichitoratidza kuti hativadi.—Zvirevo 17:17.
Ungaita sei kana uchinyanya kuzvidya mwoyo?
Vanhu vanogona kuzvidya mwoyo nemhaka yezvakaipa zvavakamboita, nezveramangwana ravo kana kuti nezvenyaya dzemari. *
Kunetseka nemhaka yezvakaipa zvawakamboita: Vamwe vanhu vakararama panguva yevaapostora vaimbova zvidhakwa, makororo, zvifeve uye mbavha vasati vava vaKristu. (1 VaKorinde 6:9-11) Pane kuti varambe vachinetseka nemhaka yezvavaimboita kare, vakachinja mararamiro avo vaine chivimbo chizere chekuti Mwari aizovanzwira tsitsi nemwoyo wose. Pisarema 130:4 rinoti: “Nokuti imi [Mwari] munokanganwira zvechokwadi, kuti mutyiwe.”
Kunetseka pamusoro pekuti ramangwana richange rakadini: Jesu Kristu akati, “Musambozvidya mwoyo pamusoro pezuva rinotevera, nokuti zuva rinotevera richava nokuzvidya mwoyo kwaro.” (Mateu 6:25, 34) Airevei? Funga nezvematambudziko anhasi chete. Usaomese zuva rako ranhasi nekufunga nezvematambudziko achazouya mangwana, nekuti izvi zvinogona kukanganisa maonero ako woita zvisarudzo zvisina kunaka. Uye unofanira kuziva kuti, zvimwe zvatinozvidya mwoyo pamusoro pazvo hazvizomboitike.
Kunetseka nenyaya dzemari: Murume ainge akachenjera akambonamata achiti: “Musandipa urombo kana upfumi.” (Zvirevo 30:8) Aida kugutsikana nezviripo, uye izvi zvinoita kuti munhu afarirwe naMwari. Pana VaHebheru 13:5 panoti: “Mararamiro enyu ngaave okusada mari, muchigutsikana nezvinhu zvinenge zviripo. Nokuti iye [Mwari] akati: ‘Handingambokuregerei kana kumbokusiyai.’” Kusiyana nemari, iyo inogona kutadza kukubatsira, Mwari haambotadzi kubatsira vaya vanovimba naye uye vachirarama upenyu husina zvakawanda-wanda.
“Handina kumboona munhu akarurama achisiyiwa zvachose, kana vana vake vachitsvaka zvokudya.”—Pisarema 37:25.
Kuzvidya mwoyo kuchazopera here?
“Iye zvino vanhu kwose kwose vava kuzvidya mwoyo,” akadaro mutori wenhau, Harriet Green, munyaya yakabuda mupepanhau rinonzi The Guardian muna 2008. Muna 2014, Patrick O’Connor akanyora muThe Wall Street Journal kuti “Vanhu vekuAmerica vava kuzvidya mwoyo zvavasati vamboita.”
“Kuzvidya mwoyo kuri mumwoyo momunhu ndiko kuchaukotamisa, asi shoko rakanaka ndiro rinoita kuti ufare.” (Zvirevo 12:25) ‘Shoko rakatonyanya kunaka’ rinogona kuwanika mumashoko akanaka eUmambo hwaMwari. (Mateu 24:14) Umambo ihwohwo ihurumende yaMwari, uye huchaita zvatisingafi takakwanisa kuita. Huchabvisa zvinhu zvose zvinoita kuti vanhu vazvidye mwoyo, kusanganisira kurwara uye rufu! “[Mwari] achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve.”—Zvakazarurwa 21:4.
“Mwari anopa tariro ngaakuzadzei nomufaro wose norugare rwose nokuda kwokutenda kwenyu.”—VaRoma 15:13.
^ ndima 10 Zvakanaka kuti vanhu vanenge vachinyanya kuzvidya mwoyo vanoona chiremba. Mukai! haisarudzire munhu kuti anofanira kurapwa nenzira ipi.
Vanhu vanozvidya mwoyo vari kuramba vachiwedzera munguva dzino dzakaoma. Bhaibheri ringakubatsira here kana uchizvidya mwoyo?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kuzvidya Mwoyo